crossorigin="anonymous"> crossorigin="anonymous"> Nairobi – Caasimad ka kooban laba magaalood oo quruxda geeska Afrika iyo qashinka Afrika kala matala. | HimiloNetwork
Nairobi – Caasimad ka kooban laba magaalood oo quruxda geeska Afrika iyo qashinka Afrika kala matala.
Posted by: Zakariya in Wararka December 7, 2016	0 572 Views
Nairobi (Himilonews) – Bilowga qarnigii 20aad ee ina dhaafay, siiba malahayga sanadkii 1904, ayay aheyd markii ugu horreysay ee si rasmi ah loo deegaameysto magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Magaca Nairobi laftigiisa ayaa si cad u qayaxa barta juqraafi ahaaneed ee ay dhacdo iyo sida ay ahaan jirtay kahor magaaloobiddeeda.
Qowmiyadda Maasai-da loo yaqaan oo qeyb ahaan kamid ah qowmiyadaha 40-ka kor u dhaafaya ee wada dega Kenya ayaa la tilmaamaa inay ahaayeen dadkii halkan deganaa waagaas kahor – xittaa magaca Nairobi oo lagu fasiro kobta qabow, waxaa asal ahaan uu ka yimid afkooda.
Dabcanna, Nairobi ma ahan meel ka duwan magaceeda cimilo ahaan. Qabowga aan yareyn ee marmar – sanadii hore – lagu yiqiin inuu baraf la yimaado iyo dhaxanta habeen iyo dharaar isku midka ah oo loo geeyey roob inta badan u da’a si aan kala joogsi laheyn ayaa ka dhigtay magaalooyinka dhif-dhifka ah ee si dhab ah deegaan ahaan u qaatay magacooda.
Dadka ku nool magaaladan waxay u nool yihiin sidii ay awalba u noolaayeen; noloshuna ma dhib yara. Badigood dadka halkan jooga waxay iskugu jiraan dad shaqo u yimid oo ay u furan yihiin xarumo ganacsi, ardayda wax-barasho u joogta iyo dalxiisayaal gudaha ah oo fasaxyada dugsiyada uga yimaado xilli kasta iyo sidoo kale dad yar oo caafimaad iyo wixii la halmaala u jooga kuwaas oo tirada ku nool Nairobi oo lagu qiyaaso laba milyan oo dheeraad kaga jirta 35%.
Soomaalida ayaa kamid aheyd bulshada ugu kobaca badan deegaamaysiga iyo nolosha caasimadnimo ee Nairobi. Waana qowmiyadda doorka ah, marka loo fiiriyo kaalinta ay kaga jiraan ganacsiga dalkan Kenya, kuwo ku jira kaalmaha ugu horreeya kuwaas oo dhaqaalaha dalkan qeyb ballaaran kaga jira.
Sara-u-kacooda dhaqan-dhaqaale ee nolosha Nairobi awgeed, hadda degmo kasta oo kamid ah county-ga caasimadda, Soomaalidu waxay ka noqdeen tilmaan iyo kuwo la tirsado– iyada oo hadda mudnaan lagu siiyay sida ay u badaleen nolosha jiilka Kenyaanka aan Soomaalida aheyn ee kula nool meelaha ay kaga badan yihiin Nairobi.
Soomaalidu lamid ahan qowmiyadda Hinduuga, oo in kasta oo ay dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan loolan nagula jiraan, hadana aan helin tartan adag oo ay Soomaalida kula galaan la-qabsiga iyo soo jiidashada dadka madowga ah ee Kenyaatiga oo ay ugu yeeraan Addoomeey ama Cabiid.
Dhan kastaba, marka aad dhex timaado gudaha xaafadda East Light ama Islii, waxaa kuu muuqanaya sida huban ee ah natiijada horumarka leh ee ay gaareen Soomaalidu kolkii ay waqti iyo maalba galiyeen dalkani Kenya – u eegis la’aan haddii ay habbooneyd iyo in kale.
In kasta oo Soomaalida Kenya ka cawdaan gacan-bidixeyn ay dowladdu ku heyso, hadana baaqoodii muddaba isasoo tari jiray wuxuu ku dhacay dhego laab u duleela. Hadda markii aan kusoo laabmay magaalada Nairobi, meelihii dhiiqada darteed laga caaganaan jiray maristooda iyo muuqaalladii ka dhalan jiray hufnaan la’aanta ay dhigeen dowladda hoose ee magaalada Nairobi in badan iima sii muuqan. Waxaana rogaalkeeda badalay dhismaha waddooyin laami ah oo meel dhexaad ah kuwaas oo fududeeyey isku socod sahlan. Waxaa intaas dheer dhismayaasha dhaadheer ee ay ku sheegaan Goroofo ayaa ah kuwo aad loo dhisay. Xittaa laba sano kahor, hotel aan jiifsan jiray oo dhismayaasha gaagaaban ahaa waxaa laga dhigay dabaq sideed isasaar ah.
Balse ma ahan Islii iyo meel kale oo ay Soomaalidu kaga badan tahay Nairobi kuwo ay ku kali yeeleen wax-qabadkooda. Mid kamid ah meelaha il-qabadka leh ee caasimadda dalkan Kenya oo ay ku yaalliin xarumaha muhiimka ah, safaaradaha, hoteellada waaweyn iyo xittaa jaamacadaha iyo bangiyada reer Galbeedka iyo wixii lamid ah oo ah Town-ka ayay Soomaalidu si kale oo hadana lagu faani karo kaalin ganacsiyeed uga sameeyeen. Waxaa jira baarar, shirkado ganacsi oo casri ah iyo qeybo kale oo Soomaalidu ku leedahay kobtan loogu yeero Small America.
Dabaqyada quruxda badan, jidadka sida hallaasiga ah loo dhisay, isugu geynta xarumaha qadiimka ah sida matxafka Kenya iyo wixii lamid ah ayaa halkan ka dhigtay caasimad yar oo ka soocan qeybaha kale ee magaalada Nairobi.
Magaca Small America ayay ku sifeeyeen markii ay xittaa iska diideeen in jidadkeeda lagu tufo candhuufta ama xaakada. Si dhab ah marka aad u qiimeysana, kuguma soo dhaceyso adigaba inaad ku tufto xaako. Markii ugu horreysay ee aan gaaro Town-ka, way igu adkeyd inaan rumeyso in meeshani kamid tahay magaalada Nairobi.
Waliba xeerarka iyo qawaaniin dhaqan-galka ka ah halkaas, meelaha kale ee caasimadda Nairobi sida 8Islii lagama yaqaan. Tani haddii ay wax ii muuji karto, waxay in yar iga xusuusiyay dalka Singapore oo ah dalka ugu nadiifsan caalamka oo aadan saxar yar oo ku biday jidadkeeda ku arkeyn. Mise ogi in – diidmada ah inaan candhuuf lagu tufin jidadka Town-ka, ay tahay mid ay ka barteen Singapore.
Muuqaallada quruxda ee aan halkan ka jecleystay waxay isku badaleen eber-iyo-dhoobdhoob markii aan arkay Kibera oo ah meesha ugu weyn xaafadaha isku raranta ah ee ku yaalla qaaradda Afrika. Wax walba oo liddi ku ah Town-ka ayaa ka jira Kibera. Majirto jidadka quman oo isku furan ah; hana sheegin taraafiko iyo wixii la halmaala. Dhiiqada iyo uskagga waa martida soo dhaweynta leh ee soo qaabila qofkii yimaada halkan. Mana laga yaqaan wax la yiraahdo sanitary ama nadaafad.
Is-biirsiga xaaladahan adag ee nolosha xaafaddan isku raranta ah ee Kibera awgeed, dad badan ayaa u dhinta cudurro dhowr ah sida Daacuun-calooleedka, Kaneecada iyo wixii lamid ah. Ayaan-darrase, dadka halkan ku nool mahayaan jid kale oo aan ka aheyn inay ku noolaadaan isku raranta Kibera oo uga dhigan xulashada kaliya ee ay ka dhaxleen nolosha Nairobi; mana u jeedaan xal muuqda oo uga yimaada dowladdooda.
Hadaba, aragtidayda, nadaafadda iyo bilicda ka jirta Town-ka iyo meelo kale oo la halmaala ma ahan natiijo ku timid dareen dal-jecleysi iyo wadaniyad – mar haddii Kibera oo ah isku raranta ugu il-darrada xun Afrika ay kula taallo gudaha Nairobi. _______________________________________________________________________
Qore: Zakariya Xasan Muxumed.
E-mail: hiraal86@gmail.com, hiraal114@yahoo.co.uk.
Previous: Turkiga – Awood Islaami ah oo laga heybeysto
Next: Heshiiska Turkiga iyo Israel, muxuu uga dhigan yahay gobalka Bariga Dhexe?!
La kulan – Halyeyga magangalyada u fidiyay in ka badan 300 oo xayawaanno ah.
Daawo waa Kuma Argagaxiso?!
Haweeney 101 sanno jir ah oo sannadkan kamid ah Xujeyda.